मानव शरीर मा क्यान्सर कक्षहरूको पत्ता लगाउनको लागि विधिहरू
क्यान्सर - हाम्रो समय को सबै भन्दा गम्भीर रोग को एक। अब मान्छे को अवस्थामा संख्या गत दशकहरूमा को स्तर surpasses। यस्तो घटना वैज्ञानिकहरूले आधुनिक समाज को अवस्थामा व्यक्ति प्रभावित प्रतिकूल कारक मा वृद्धि संग थप्नुभएको छ। क्यान्सर कक्षहरूको अध्ययन र तिनीहरूलाई सामना गर्न विधिहरू विकास ओन्कोलजी मा लगी भएको छ। अनुसन्धानहरूले समयमा यो रोग को निदान मा समृद्ध अनुभव संचित छ।
निदान र समस्या को उपचार
जब क्यान्सर घाउ therein गठन metastases शरीर। रोग ठाउँमा ट्यूमर foci को, बिगडा स्थानीयकरण progresses गर्दा जहाँ तिनीहरूले मूल फेला परेन। क्यान्सर कक्षहरू शरीर मार्फत फैलाउन यस्तो घाउ अलग र नयाँ metastases गठन गर्न सकिन्छ। र तिनीहरूले पनि अत्यन्तै जाँगरको छ। एक यस्तो मोबाइल सेल मात्र प्रमुख क्यान्सर हुन सक्छ। को कठिनाई को उपचार तथ्यलाई मा निहित मेटास्टेसिस जलाएर हामी शरीर कुनै क्यान्सर कक्षहरू ग्यारेन्टी गर्न सक्दैन भनेर। रोगी केमोथेरापी को एक पाठ्यक्रम पारित गर्न आवश्यक कुनै पनि मामला मा छ।
चिकित्सा यो समस्या हल नजिक आएको छ। क्यान्सर चिकित्सा विज्ञानियों क्यान्सर कक्षहरूको अंकन अनुमति दिन्छ कि एक विधि मिल्यो। लेबल वस्तु सजिलै पत्ता सकिन्छ। यस्तो विश्लेषण विकास यसको प्रारम्भिक चरणमा क्यान्सर पत्ता लगाउन सम्भव बनाउँछ। यो पनि उपचार प्रक्रियामा रोगी को स्थिति अनुगमन लागि प्रयोग गरिन्छ र रूपमा सही आवश्यक प्रक्रियाहरु को मात्रा समायोजन गर्न मद्दत गर्दछ। यो एकदम क्यान्सर उपचार गर्न शरीर गर्न क्षति कम गर्छ। साथै, ट्यूमर कक्षहरू उपस्थिति रोगी को रगत मा आफ्नो चयापचय उत्पादनहरु मा स्थापित गर्न सकिन्छ। यो गर्न, क्यान्सर कक्षहरूको विश्लेषण मा आयोजित। यो प्रक्रिया को मूल्य2मिलियन 700 rubles (लागत ट्यूमर मार्कर को प्रकार मा निर्भर गर्दछ) बाट फरक हुन्छ।
को निदान मा radioisotopes को प्रयोग
क्यान्सर लक्षण को खोज को लागि सबै भन्दा उन्नत प्रविधि प्रयोग भएको छ। कुनै स्पष्ट लक्षण हुँदा Radioisotope अध्ययन, असामान्यताहरु पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई जोखिममा छन् मानिसहरूलाई सिफारिस गरिएको छ। यी गर्ने क्यान्सर विरामीहरु थिए परिवारमा विरामीहरु छन्।
पोजीट्रान उत्सर्जन tomography
यो अध्ययन सही निदान को आधुनिक तरिका बुझाउँछ। यो केवल रोग को प्रारम्भिक चरणमा क्यान्सर कक्षहरू पत्ता लगाउन सम्भव बनाउँछ, तर पनि हामीलाई मानव शरीर मा आफ्नो आन्दोलन पहिल्याउन अनुमति दिन्छ। पीईटी चिकित्सक आधारित कुनै पनि कपडा प्रसार metastases मा मान, र रोकथाम समय सुरु सक्षम छ।
उपचार नतिजा को भविष्यवाणी
उपचार को अनुकूल नतिजा पनि उपचार निर्भर गर्दछ। चिकित्सा हस्तक्षेप क्यान्सर को प्रारम्भिक चरणमा भयो भने, त्यहाँ एक सफल रिकभरी लागि ठूलो संभावना छन्। यी विरामीहरु बीच, संख्या रोग पिटे र सामान्य जीवन शैली फर्के 70-95% छ।
दिमागको ग्लिओब्लास्टोमा: तिनीहरू कसरी मर्छन्? ग्लिओब्लास्टोमा: डिग्री, प्रजनन
Undifferentiated कार्सिनोमा: पूर्वानुमान। मुख्य लक्षण, कारण र विधिहरू
स्तन क्यान्सर, चरण 2a: पूर्वानुमान। स्तन क्यान्सर चरण 2a उपचार?
21 औं शताब्दीको प्लेग क्यान्सर हो। यसमा पेट र घातक ट्यूमर
रोकथाम र इस्राएलका कलेजो क्यान्सर को उपचार
कार्सिनोमा - कि के हो? Squamous सेल कार्सिनोमा
कसरी घर मा आफ्नो फिर्ता निर्माण गर्न?
फार्मेसी मा चिया पातलो: समीक्षा, मूल्यहरू
विलियम शेक्सपियर, "भेनिस को व्यापारी": एक सारांश
होटल रेजिना एक्वा पार्क Resort4* (मिश्र / Hurghada): विवरण, फोटो, पर्यटकहरु को समीक्षा
PPT-ढाँचा कस्तो छ
अनातोली Osmolovsky - जीवन र काम को इतिहास
को mentality immutable छ?
कसरी एक फ्लैश ड्राइव डेटा पुन: प्राप्त गर्न?
हास्यास्पद मेला प्रतियोगिताहरु
वोरोनिश मा सस्ता होटल। होटल "डन" (वोरोनिश): फोटो र समीक्षा
अनुहार लागि चिया रूख तेल: आवेदन (समीक्षा)